Izindaba - IZINDLEKO ZOKUTSHAYELA ZENZA UKWENZAKALA KWABASEBENZI BEMISHINI
IZINDLEKO ZOKUTSHALA ZENZA UKWENZAKALA KWABASEBENZI BEMISHINI
Ngo-Ephreli 2020, intengo yensimbi yasekhaya isalondolozwa cishe ku-3100 yuan / ton, ngenkathi ngoMeyi 2021, intengo yesikhathi esizayo yensimbi iqhubekile nokukhuphuka yaya cishe ku-6200 yuan / ton, intengo inyuke icishe yaphindeka kabili, ishaya irekhodi elisha.
Ukushintshwa kwentengo yensimbi, kubangele a umphumela omkhulu ku IsiShayina imboni yokukhiqiza, ikakhulukazily, kulezo zimboni zokuthunga okuyinto izosebenzisa insimbi eyengeziwe, Imboni yezokuthutha, imboni yemishini yasendlini, ukukhiqizwa kwemishini, njll. Izizathu eziyinhloko zokukhuphuka kwentengo yensimbi akuzona kuphela ngoba imali ekhishwe ngokweqile cindezela amanani wemikhiqizo , kodwa futhi ngenxa ye i I-COVID, ukutshalwa kwemali okwandisiwe kwingqalasizinda kanye nezithiyo kwezokuthutha, nakho kukhuphula izindleko zezinto zokusetshenziswa. Esinye isizathu ubuhlobo bokunikezela nokufunwa kwensimbi yensimbi engenisiwe eChina.
Ngenxa yokwenyuka kwentengo yento eluhlaza, izindleko zokukhiqiza zabakhiqizi nazo ziyakhuphuka. kuthatha isikhathi kusukela ikhasimende lifake i-oda thenga izinto zokusetshenziswa bese uqala okokukhiqiza. Ngalesi sikhathi, intengo yezinto zokusetshenziswa inyuka ngokushesha futhi ngokungalindelekile.Lokho kusho ukuthiabakhiqizi be-fter bathola ama-oda, izindleko zikhuphuka ngokushesha kuze kube sezingeni lokulahleka ngaphambi kokulethwa. Noma kunjalo, inkontileka ingakwazikungashintshwa kalula, ingasaphathwa eyokukhulisa intengo. Lokhu kuholela kufayela le- ukuncipha kwe- umkhawulo wenzuzo Okwe abakhiqizi bemishini ngokuqhubekayoNgokwenkambiso yamanje yentengo yensimbi ekhulayo, uma abakhiqizi khuphula intengo futhi, amakhasimende awanelisi,lapho-ke khansela ama-oda, umphumela labakhiqizi ukunciphisa ama-oda futhi okubi kakhulu.
Njengamanje, izintengo zensimbi kunzima ukwehlisela ezingeni langaphambilini esikhathini esifushane, kusekhona indawo ephakama, sidinga uku zilungiselele kahle ukukhuphuka kwentengo kwazo zonke izinhlobo zempahla. Okwamanje, sethemba ukuthi amakhasimende azothatha izinqumo ezihlakaniphile ngokuthenga. Uma’Ukufunwa okuqinile, ukuthenga kwangaphambilini kungcono.